Zimstat Archives - The Source
HARARE, March 15 (The Source) – Zimbabwe’s year on year inflation rate for the month of February stood at 0.06 percent, after gaining 0.71 percentage points on the January 2017 rate of -0.65 percent, the statistics agency reported on Wednesday. It marks the first time… Read More
BULAWAYO, November 30 (The Source) — Zimbabwe’s trade deficit narrowed to $151 million in October 2016, as exports increased by 27 percent from September to $318 million, latest data from the national statistics agency has shown. Exports grew 27 percent in October compared to the… Read More
October inflation up to -0.95 percent
HARARE, November 15 (The Source)- Zimbabwe’s annual inflation for the month of October gained 0.37 percentage points to -0.95 percent, the national statistics agency reported on Tuesday. Month-on-month the inflation rate was up 0.35 percentage points to 0.09 percent in October, Zimstat said.
HARARE, October 14 (The Source) – Zimbabwe’s year on year inflation rate for the month of September stood at -1.33 percent, gaining 0.10 percentage points on the August rate of -1.43 percent, the statistics agency reported on Friday. On a monthly basis, the inflation rate… Read More
HARARE, September 15 (The Source) – Zimbabwe’s year on year inflation gained 0.18 percentage points in August to -1.43 percent, the national statistics agency said on Thursday. On a monthly basis, the inflation rate stood at -0.13 percent gaining 0.06 percentage points on July rate… Read More
June inflation up marginally to – 1,37 percent
HARARE, July 15 (The Source) – Zimbabwe’s annual inflation for the month of June gained 0.33 percentage points to – 1,37 percent, the statistics agency reported on Friday. Month on month the inflation rate increased 0.43 percentage points to 0.19 percent, the Zimbabwe National Statistics… Read More